Waa sahlan tahay in la sameeyo isjiidka la casriga video software. Waxaad si fudud u dooro clips video in aad jeclaan lahayd inaad ka mid ah oo iyaga keeno; ka dhigi horyaal ah, sudhaa clips oo horyaal si aad rabto; iyo qaar ka mid ah ku darto music iyo codka ayaaba. Halkan waxa ku jira 10-dejiyeyaasha trailer ugu wanaagsan ee aad isku dayaan in ay ka soo.
1. Windows Movie Kan sameeyey,
Tani waa kii weyn trailer oo kuu ogolaanaya in aad xaalkaa videos iyo bandhigyada slide, la abuuro koobab, iyo hufay aad trailer sida aad u rabto in aad. Xitaa Waxaad ku dari kartaa kala guurka iyo saamaynta iyo wadaagno trailer online. Maxaa ka fiican waa in ay lacag la'aan ah.
2. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Price: FREE in ay isku dayaan iyo $39.99 u nooca buuxda
Tani waxay u ogolaaneysaa in aad soo dhoofsadaan iyo edit kaliya oo ku saabsan qaab video kasta, ku dar horyaal oo maqal ah iyo dhalin trailer weyn. Waxaa lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah si ay u tijaabiso.
Price: FREE ah ee Mac cusub iyo ku dhowaad $14.99 haddii aad iibsato
Tani waa video gaare ah casri ah in u san yahay samaynta isjiidka. Si fudud u geliyaan clips aad waqtiga a, hareerahooda tago, trailer ah. Waxaa la sameeyo Apple oo ku ordi doonaa on Apple telefoonada, kiniiniyada iyo qalabka macruufka iyo MAC ah.
4. Trailer Kan sameeyey by Saddex iyo toban
Tani waa nooc oo kala duwan oo gaare trailer taas oo ah mid aad u xiiso leh iyo waxbarasho si ay u isticmaalaan. Halkan waxa aad ka samayn kartaa trailer gaar ah barnaamijyada hadda jira iyo waxa ay u geliyaan in website-ka iyo toban. Waxaa gebi ahaanba waa bilaash ah si ay u isticmaalaan.
Price: free videos for ka yar 60 ilbiriqsi ama $ 19 u videos muddo ka badan 60 seconds
VideoCrisp waa kii trailer weyn online oo kuu ogolaanaya inaad si ay u abuuraan trailer ah online iyo download it in aad website. Waxaad si fudud ku dari gaaban video clips, animations, sawiro iyo koobab. Waa maxay dheeraad ah website-ka waxaa ka mid ah wax badan liisanka video content aad isticmaali karto si aad u hagaajisid shaqo oo siiyaa dareenka ah oo khibrad leh.
Wax waa aalad video tafatirka taas oo si caddaalad ah u fududahay in la isticmaalo, halka weli arrin awood badan. Waxaad isticmaali kartaa feature waqtiga si ay u abuuraan isjiidka si fudud oo ku darto saamaynta gaar ah. Waa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan iyo waxa ay taageertaa qaabab badan oo kala duwan file video.
Price: from $ 50 ilaa $179.99
Haddii aad tahay hami ku saabsan samaynta isjiidka oo aad rabto inay kuu eegi xirfad dhab ah ka dibna CyberLink PowerDirector bixisaa editor a full video in kuu ogolaanayaa inaad isku daraan dhammaan noocyada kala duwan ee multimedia oo ay ka mid videos, sawirada, layers qoraalka, kala guurka, iyo dhawaaqa. Waxaad daabici karo natiijada, ama badbaadin on qalab aad. Waxaad samayn kartaa isjiidka 3D.
Price: free in ay isku dayaan ama ka $ 60 nooca buuxda
VideoStudio Ultimate X7 by Corel waa 64 yara video editor ah oo u san yahay samaynta isjiidka xirfad sareysa. Waa ay fududahay in la isticmaalo iyo waxa uu leeyahay nooca qalabka tafatirka video aad ka fili lahayd xirmo software premium ah.
9. Dub Virtual
Virtual Dub waa kii si caddaalad ah oo aasaasi ah movie in xor u yahay inuu kala soo bixi oo isticmaal. Waxaa muhiimad freeware laakiin waa si dhakhso ah oo uu leeyahay muuqaalada qaar ka fiican sida heerka jir jajab. Waxaa jira qaar ka mid ah video aad u fiican sida diirada aad.
Zwei-Stein waa editor a free video oo ay ku jiraan qaar ka mid ah muuqaalada sare qaar ka mid ah oo aan ka helay on xitaa bixisay video tifaftirayaasha. Waxaad ku dari kartaa oo saxaa ilaa 256 clips, sawirada ama horyaal oo ku darto saamaynta gaar ah trailer aad u fiican.
> Resource > Video > 10 Rinjiga Trailer Best